एमाले प्यूठानको अवको अध्यक्ष को ?
बुधवार, पुष २१, २०७८ प्यार अलि खाँन
चार जना आकांक्षी, सहमती खोज्दै नेताहरु
प्यूठान : नेकपा एमाले प्यूठानको नवौं जिल्ला अधिवेशनको मिति नजिकिएसँगै अध्यक्षमा आकांक्षीको चर्चा शुरु हुन थालेको छ । यद्यपी, नेताहरु सर्वसम्मत रुपमा नेतृत्व चुन्ने सहमती खोज्दै छन् । सहमतीमै नेतृत्व चुनिने वा निर्वाचन हुने भन्नेमा अझै एकिन हुन सकेको छैन् । हालसम्म विशेषगरी जिल्लाका चार नेताहरुको चर्चा शुरु भएको छ ।
वर्तमान अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र सचिवले आगामी नेतृत्वका लागि चाहना देखाएका छैनन् । तर, सर्वसम्मत नेतृत्व चयन भएमा वर्तमान पार्टी अध्यक्ष तुल्सीराम शर्मा पूनः दोहोरिने संभावना पनि छ । हाल जिल्ला नेतृत्वमा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव र उपसचिव गरी चार पदाधिकारी छन् । तर, यसवर्षदेखि एक जना उपसचिव थप गरी पदाधिकारी पाँच जना हुनेछन् । वर्तमान पार्टी उपसचिव मधुर शर्मा, जिल्ला सचिवालय सदस्य नेहरसिँह केसी, लुम्विी प्रदेश कमिटी सदस्य अजय सिँह र विजयविराज विष्ट अध्यक्षको आंकाक्षीमा देखिएका छन् ।
आकांक्षी को कस्ता ?
एमाले वर्तमान उपसचिव मधुर शर्मा प्यूठान नगरपालिका २ दाखाक्वाडी निवासी हुन् । वर्तमान पदाधिकारीहरु मध्येबाट अध्यक्षमा आंकाक्षी नदेखिएपछि स्वभाविक रुपमा आफ्नो दाबी अध्यक्षमा हुने उनको तर्क छ । ‘वर्तमान पदाधिकारीबाट अध्यक्ष पदको लागि दाबी अहिलेसम्म गर्नुभएको छैन्’,शर्माले भने,‘त्यसैले पनि मेरो उमेदवारीको मार्ग प्रशस्त हो ।’ जनताका समस्यालाई आफ्नै समस्याजस्तै मानेर सुल्झाउने नेताहरुको अग्रपङ्तिमा शर्माको नाम लिने गरिन्छ । युवा नेता शर्माले दल भित्र र बाहिरका सबै नेता कार्यकर्तासँग सुमधुर सम्बन्ध स्थापित गरेका कारणले पनि उनी सबैमाझ प्रिय छन् । मनमा लागेको कुरा स्पष्टसँग भन्ने र सानाठूलासँग छिट्टै घुलमिल हुनसक्ने उनमा स्वभाव छ । यही स्वाभावले पनि उनी आफ्नो र बाहिरी दलका नेता, कार्यकर्ताहरुसँग छिट्टै घुलमिल हुन्छन् ।
अध्यक्ष पदका अर्का प्रत्यासी अजय सिंहको स्थायी घर नौवहिनी गाउँपालिका ६ स्थित लुङ हो । नेतृत्वको लागि आफू पूर्ण रूपमा तयार रहेको उनले प्रतिक्रिया दिएका छन् । ‘देखिएका प्रत्यासीहरुमध्ये म सबै भन्दा सिनियर हु’, उनले भने,‘सहमतीको नाममा म पछि हट्दैन ।’ सिंह एमाले संस्थापक नेता विर बहादुर सिंहका छोरा समेत हुन् । उनी प्यूठान–काठमाण्डौँ सम्पर्क मंचका संस्थापक अध्यक्ष हुन् । लामो समय पार्टीमा पु¥याएको योगदानकाले पनि आफ्नो बोलियो दाबी अध्यक्षमा हुनु स्वभाविक रहेको उनी तर्क गर्छन् ।
नेहरसिँह केसी प्यूठान नगरपालिका १० निवासी हुन् । उनी हाल प्यूठान नगरपालिका १० कै वडा अध्यक्ष समेत हुन् । पार्टीको सचिवालय सदस्य उनी पूर्व कार्यालय सचिवको रुपमा समेत काम गरे । आफू सर्वसमम्तको विरोधी नभएको उनले प्रतिक्रिया दिएका छन् । ‘औचित्य सहितको सहमती भए म पछि हट्न पनि सक्छु’,उनले भने,‘सहमती नभए प्रतिस्पर्धाको लागि म तयार छु ।’
अखिलमा लामो समय बिताएका बिष्टले माओवादी द्धन्दकालमा प्यूठानको विद्यार्थी आन्दोलनको नेतृत्व गरेका थिए । उनी पूर्व उपप्रधान एवं गृहमन्त्री वामदेव गौतमको सचिवालयमा समेत रहेर काम गरे । बिष्टलाई पार्टी भित्र निडर नेताको रूपमा लिईन्छ । नेतृत्वका लागि सहमतीको प्रयास भइरहेको बिष्टले बताएका छन् । ‘सर्वसम्मतको लागि हामी सबै प्रयत्नशील छौँ’,उनले भने,‘सहमती नभएको अवस्थामा म प्रतिस्पर्धाबाट पछि हट्दैन ।’ उनी हाल लुम्विनी प्रदेश कमिटी सदस्य समेत हुन् । विष्टको स्थायी घर पनि प्यूठान नगरपालिका ३ दाखाक्वाडी हो ।
जिल्ला अधिवेशनका लागि ५ सय ४ जना प्रतिनिधीहरु छनौट भएका छन् । पुस २३ गते विजुवारस्थित उमेशस्मृती भवन (पार्टी कार्यालय) मा उद्घाटन र पूण्यखोलास्थित कबर्ड हलमा बन्द शत्र चल्ने कार्यक्रम रहेको एमाले प्यूठानले जनाएको छ । अधिवेशन उद्घाटनका लागि पार्टीका केन्द्रिय उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवाली आउने कार्यक्रम रहेको छ । एमाले स्थायी कमिटी सदस्य मणी थापा, पोलिटव्यूरो सदस्य एवं प्यूठान इन्चार्ज सूर्य थापा, केन्द्रिय सदस्य एवं प्यूठान सह इन्चार्ज हरि प्रसाद रिजाल जिल्लामै छन् । उनीहरु जिल्लाका विभिन्न पार्टीका कार्यक्रमहरुमा सक्रिय छन् । केन्द्रिय नेतृत्व सहित पार्टी अध्यक्ष तुल्सीराम शर्मा, संविधानसभा सदस्यद्धय हिरा बहादुर केसी, धन बहादुर रायमाझी लगाएत नेताले नेतृत्व कसले लिने भन्नेमा अझै मुख खोलेका छैनन् । उनीहरु सर्वसम्मत नेतृत्वको पक्षमा उभिएको देखिन्छ । एमाले प्यूठानको पहिलो पार्टी हो ।
प्रकाशित मिति: बुधवार, पुष २१, २०७८, ०७:१०:१४
आहा ! सानदार झिमरुकको सिँहदरवार बिहिवार, माघ १३, २०७८ 959